Global Voices teny Malagasy · 22 Jolay 2018
22 Jolay 2018
Tantara tamin'ny 22 Jolay 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Jolay 2018
Afrika Mainty22 Jolay 2018
Taorian'ny fihetsiketsehana sy fifampiraharahana maro nataon'ny mpampiasa sy ny mpiasa, nanapaka hevitra ny hanondrotra ny karama farany ambany ho 3000 tk isam-bolana (latsaky ny 40 eoros) ny fanjakana, izay mitovy amin'ny in-droan'ny karama farany kely indrindra ankehitriny. Mandajalanja ity revolisiona ho an'ny indostrian'ny lamba ao Bangladesh ity ny blaogera.
Pakistana: Fahamarinan-toerana, Fikatrohana ary Fahalatsahana an-katerena
''Manadihady ny hevitra momba ny demokrasia sy ny fahamarinan-toeran'ny firenena ny fanehoankevitr'ireo blaogera, eo am-pijerena ny vokatry ny toedraharaha politika ankehitriny. ''
Azia Atsinanana22 Jolay 2018
Ny volana Aprily no volana tena mahafinaritra indrindra hatrany isan-taona ho an'ny Birmana, satria io no volana hankalazana ny Thingyan - ny fetiben'ny rano -. Io ihany koa no fiandohan'ny taona vaovao ao amin'ny alimanaka Birmana.